မေးမြန်းချက် Archives > Page2of7> မွန်သတင်းအေဂျင်စီ
Home / မေးမြန်းချက် (page 2)
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အရေးသုတေသီ ဦးမောင်မောင်စိုးအား တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်
May 9, 2017 မေးမြန်းချက်, သတင်း 0
KIA/KIO နှင့် WNO တို့ UNFC က နှုတ်ထွက်စာတင်လာသည့်အတွက် UNFC အားနည်းလာပြီး KNPP နှင့် NMSP နိုင်ငံရေး အကြပ်အတည်းဖြင့် ရင်ဆိုင်နေကြရသည်။အလားတူ UWSA ကလည်း ၎င်းဦးဆောင်သည့် ကော်မတီနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်အား တွေ့ဆုံသွားရန် ပြင်ဆင်လျက်ရှိရာ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် မည်သို့ ပြောင်းလဲလာနိုင်သလဲ အားလုံးက စိတ်ဝင်စားလျက်ရှိနေသည်။ ထိုဖြစ်စဉ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အရေး သုတေသီတစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးမောင်မောင်စိုး အား မွန်သတင်းအေဂျင်စီ MNA အလွတ်တန်းသတင်းထောက် ချစ်မင်းထွန်း တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါသည်။
May 2, 2017 မေးမြန်းချက် 0
မွန်ဆားလုပ်ငန်း ပြန်လည်ဦးမော့နိုင်ရေး SME နှင့်ချိတ်ဆက်ပေး တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်
April 27, 2017 မေးမြန်းချက် 0
မွန်ပြည်နယ်ဆားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းအဖွဲ့ဝင်၊ မြန်မာနိုင်ငံဆားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် မင်းတင်မောင်ဝင်း(ခေါ်) နိုင်ဟု နှင့် မွန်သတင်းအေဂျင်စီမှ မင်းထက်အောင် တွေ့ဆုံမေးမြန်းသည်။
ရက္ခိုင့်တပ်မတော် ဒု-စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ် ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်နှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်
April 10, 2017 မေးမြန်းချက် 0
“အခက်အခဲရှိရင် သူတို့အနေနဲ့ ကူညီပေးဖို့ အဆင်သင့်ရှိကြောင်း ပြောကြားထားတာတွေရှိတဲ့အတွက် တရုတ်ကို ကျနော်တို့နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ အချိန်တိုင်း ပါဝင်ဖို့ တောင်းဆိုရခြင်းဖြစ်တယ်” ရက္ခိုင့်တပ်မတော် (AA)သည် တအာင်း(ပလောင်)လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ TNLA၊ ကိုးကန့် MNDAA တို့နှင့် မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းကာ လက်ရှိ မြန်မာပြည် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအတွင်း ပါဝင်ခွင့်ရရှိရေးနှင့် ရက္ခိုင့်လူထု ရသင့်ရထိုက်သော အခွင့်အရေးများအတွက် တိုက်ပွဲဝင်လျက်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် တပ်မတော်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင် တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားနေသကဲ့သို့ ရခိုင်ဒေသမှာလည်း တခါတရံ တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားနေသည်။
ချောင်းဆုံမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ကြည်သိန်းနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
April 3, 2017 မေးမြန်းချက် 0
၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ချောင်းဆုံမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခံရသူ ပြည်တောင်စုဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ USDP မှ ဦးအောင်ကြည်သိန်းအား မွန်သတင်းအေဂျင်စီသတင်းထောက် သြမွန် မေးမြန်းသည်။
March 22, 2017 မေးမြန်းချက် 0
မွန်ပြည်နယ် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမင်းကြည်ဝင်းအား မွန်ဘာသာဖြင့်မေးမြန်းဖြေကြားချက်ကို ဘာသာပြန်ဆိုသည်။
USDP လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးအောင်ကြည်သိန်းနှင့်တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခြင်း
February 1, 2017 မေးမြန်းချက် 0
မေး ။ ။ ချောင်းဆုံမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ယောက်အဖြစ် ဘာကြောင့်အရွေးခံဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလဲ? ဖြေ ။ ။ ဘာလို့ဝင်ရောက်ရွေးချယ်ခံရလဲဆိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကလည်း ဝင်ရောက်အရွေးခံခဲ့တယ်၊ ဒီကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်း ပါတီက တာဝန်ပေးတဲ့အတွက် အခုလို ဝင်ရောက်အရွေးခံရတာပါ။
KNU ဗဟိုကော်မတီဝင် ပဒိုစောအယ်ကလူစေးနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်
January 23, 2017 မေးမြန်းချက် 0
၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၈ မှ ၂၀ ရက်နေ့အထိ ဘားအံမြို့တွင် လူမျိုးအလိုက် အမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ(ကရင်) ပထမဆုံး ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့်အပေါ် KNU ဗဟိုကော်မတီဝင် “ပဒိုစောအယ်ကလူစေး”အား မွန်သတင်းအေဂျင်စီသတင်းထောက် ပိုင်နွန် တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်ဖြစ်ပါသည်။
AMDP ပါတီ ချောင်းဆုံမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း နိုင်ဝင်းထွဋ် (ခ) နိုင်မြဝင်း
January 14, 2017 မေးမြန်းချက် 0
မေး ။ ။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ယောက်အဖြစ် ဘာကြောင့်အရွေးခံဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလဲ?
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ MNP ကိုယ်စားလှယ်လောင်း နိုင်စိန်မြမောင်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်
January 8, 2017 မေးမြန်းချက် 0
မေး ။ ။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦးအဖြစ် ဘာကြောင့်အရွေးခံဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလဲ?